Vidin'ny oksizenina, mpamokatra oksizenina ara-pitsaboana - Sihope
1. Compressed rivotra dia fitaovana amin'ny fanadiovana rivotra sy ny fanamainana fitaovana fitsaboana, madio sy maina rivotra conducive amin'ny fiainana fanompoana maharitra ny molekiola sieves.
2. Ny valva tapaka pneumatic vaovao noraisina dia manana haingana fanokafana sy fanakatonana haingana, tsy misy leakage, fiainana mifamadika lava, ary afaka manome fahafaham-po ny fizotry ny adsorption miovaova matetika sy azo itokisana.
3. Famolavolana dingana tonga lafatra, fifantenana sieves molekiola vaovao
1. Manaova fetiben'ny famokarana oksizenina vaovao, manatsara hatrany ny famolavolana fitaovana, mampihena ny fanjifana angovo sy ny fampiasam-bola
2. Compact fitaovana famolavolana rafitra, mampihena ny velaran-tany
3. Ny fahombiazan'ny fitaovana dia miorina tsara, ny fanaraha-maso PLC dia hahatratra ny fampandehanana mandeha ho azy feno, ambany ny tahan'ny tsy fahombiazan'ny asa isan-taona
hiantoka anao izahay
Hamaky bebe kokoaMandehana
Tamin'ny taona 1994, ny orinasa dia nametraka mihoatra ny 40.000 metatra toradroa zavamaniry izay manokana amin'ny fitsaboana molekiola sivana oksizenina rafitra, azota milina, foibe famatsiana oksizenina rafitra, foibe suction rafitra, rivotra compressor vondrona, rivotra disinfector, voapoizina rivotra fitaovana fanadiovana, Modular Ozone mpamokatra. Ny teknolojia Sihope dia manana teknolojia patentina 76, patanty famoronana nasionaly 12 (ny orinasa dia orinasa mpanamory patanty amin'ny faritany), vokatra roa no nampidirina tao amin'ny National Torch Plan; andian-dahatsoratra telo no voasokajy ho vokatra teknolojia avo lenta.
zahao ny anay serivisy lehibe
KBA mitambatra teboka ando iva...
Heatless Purge Desiccant Co...
oxygène medikaly anaty container...
manoro hevitra izahay mba hisafidy
HangZhou Sihope dia miara-miasa akaiky amin'ny famolavolana matihanina nasionaly sy andrim-pikarohana, fanavaozana ara-teknolojia mitohy, fanatsarana ny vokatra sy ny kalitao.
ho azonay antoka fa azonao foana
HangZhou Sihope manokana amin'ny orinasa Air separator nanomboka tamin'ny taona 1994.
Ekipa manara-penitra ahitana mpiasa 302 mifantoka amin'ny asany manokana mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa.
Miandry ny fanontanianao izahay ao anatin'ny 24 ora isan'andro.
Mihoatra ny 20 ny tsenan'ny varotra ataontsika.
farany fandalinana tranga
Tetikasa rafitra fanerena rivotra
inona miteny olona
Tena te hiara-hiasa aminao aho, Satria efa niasa teo ambanin'ny foto-kevitry ny fiaraha-miasa sy ny fifanajana ny safidin'ny tsirairay. Eo anilan'ny ozininao oksizenina tsara!
HangZhou Sihope, ity no tiako momba anao! Isaky ny mahita aho fa miezaka ny hanao tsaratsara kokoa ianao - misy faniriana lehibe ho an'ny fandrosoana ao anatinao - toe-tsaina lehibe amin'ny fanatrarana zavatra iray - tiako ny fitiavako an'io toe-tsaina io.
Ianareo dia anisan'ny olona vitsy afaka miteny malalaka sy miasa mora miaraka amin'ny fisaorana! - mieritreritra aho indraindray fa tezitra sy tezitra be aho - fa ianao no mitantana ahy tsara ary mikarakara ny zava-drehetra - super ianao !! tena..
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia namolavola vokatra kilasy voalohany eran-tany miaraka amin'ny fanarahana ny fitsipiky ny kalitao voalohany. Ny vokatray dia nahazo laza tsara eo amin'ny indostria sy ny fahatokisana sarobidy eo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha ..
Ny fampitahana ny toetra mampiavaka, ny tombony ary ny fatiantoka amin'ny compressor an'habakabaka telo: compressor rivotra visy, compressor rivotra centrifugal, ary compressor piston reciprocating
1. Screw compressor Screw karazana rivotra compressor. Ny compressors rivotra visy misy menaka dia ampiasaina amin'ny fitaovana fampangatsiahana. Noho ny firafiny tsotra sy ny ampahany kely mitafy, dia mety manana mari-pana ambany entona ao anatin'ny toe-javatra miasa miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe na ny tsindrin-tsakafo, ary ny prov...
Amin'ny taona 2026, ny tsenan'ny zavamaniry fanasarahana rivotra eran-tany dia hahita fitomboana lehibe
Ny DBMR dia nanampy tatitra vaovao antsoina hoe "Tsena fitaovana fanasarahana ny rivotra", izay misy tabilao angon-drakitra momba ny taona sy ny vinavina. Ireo tabilao angon-drakitra ireo dia aseho amin'ny alàlan'ny "chat sy graphs" miparitaka manerana ny pejy ary mora azo ny fanadihadiana amin'ny antsipiriany. Ny fisarahan'ny rivotra eq...
(1), fanerena: ny tsindry voalaza ao amin'ny orinasa compressor dia manondro ny fanerena (P) Ⅰ, fenitra atmosfera fanerena (ATM) Ⅱ, miasa fanerena, suction, setroka tsindry, dia manondro ny rivotra compressor suction, setroka tsindry ① Ny tsindry refesina amin'ny tsindrin'ny atmosfera toy ny zero poi...